Izinto ziyolunga mhla i-SABC yaziqhelelanisa nepolitiki - IFP | News24
Izinto ziyolunga mhla i-SABC yaziqhelelanisa nepolitiki - IFP
Johannesburg - I-SABC nebhodi layo bayowenza ngendlela egculisayo umsebenzi mhla bahlukaniswa nezepolitiki, kusho iNkatha Freedom Party.
"Uma nje kusaqashwa ngobuqabane, ayikho into ezolunga. Lokhu kusho ukuthi lo msakazeli uyohluleka nokufeza izimfuno zomphakathi," kusho iLungu le-IFP ePhalamende uLiezl van der Merwe.
Leli qembu lithe liyaphikisana nesinqumo sikaMengameli Jacob Zuma sokuqoka uMbulaheni Obert Maguvhe njengoSihlalo we-SABC kanye noLeah Khumalo njengesekela lakhe.
OLUNYE UDABA: Kudingakala awebhodi lakwa-SABC ngokushesha
"Lokhu sikusho ngoba uMaghuve kusamele aphendule ngokukhishwa ngokungemthetho kwamalungu amathathu ebhodi ayengamataniswa nezepolitiki oHope Zinde, Rachel Kalidass noRonnie Lubisi ngasekuqaleni kwalo nyaka," kusho uVan der Merwe esitatimendeni.
UMaghuve waxosha laba bobathathu eseyibamba lenhloko yebhodi le-SABC.
I-IFP ithi uMaghuve noKhumalo bakhethelwa kulezi zikhundla ngoba "bethembeke" kuNgqongqoshe wezokuXhumana uFaith Muthambi nesikhulu se-SABC uHlaudi Motsoeneng.